Hargeysa Wakhtigeedii wuu dhamaaday.Over Over…. « CEELBARDAALENEWS.COM
« Baac Ku socda dhamaan xildhibanada iyo Madaxda Gadabursi ee ku jira Maamulka Cunsiriyada ee Isaaq.
walaal fiiriyaa Beenaalayaashan Isaaq waa Aadan Siiro iyo guuritidii xaaranta »
July, 28 2009.. Dadkan degan Gobolda Woqooyigu muddo ayey ku soo caano maleen nabad. Nabadaas iyo xasililoonaantaas waxa ay soo bilaabantay wixii ka dambeeyey Shirkii Borama 1993 ee lagu dhisay Dawladii Cigaal Runta marka laga hadlo Cigaal ma aminsaneyn in aqoonsi iman karo.lakiin waxa uu isku diyaaraney maamulka halkan uu ka dhiso inuu ugu sii gudbo mamul weyn oo somaliyeed.hase ahaatee Mashruucaas oo aanu dhamaan ayey alla Yarxama eh tii ilaahay u timid.
Wixii usoo dhisay xukumadan Rayaale sanadihii hore way sii wadeen gaar ahaan xisbigiisi udub oo ku guuleystay dooroshoyinkii madaxtooyada ,nabadii iyo xasililonaantii way sii socotay ila la soo gaadhay dhamaadkii sanadkii 2008 hore ee la isku qabtay doorashooyinkan iyo diiwaangelinta iyo dibudhacyadaas arimahaas ku yimid oo xukumad iyo xisbi mucaaraidba ay mas,uul ka ahayeen.
Wixii ka dambeeyey bilowgii diwaangelintii gobolada gar ahaan markii la bilaabay diiwangelintii gobolka Awdal ayaa waxa bilaabantay dhagar iyo dhiig iyo dhimasho aan hore udhicin oo la doonayo in dhiigaas iyo dhibtaas loo rogo codad doorasho lagu galo. Waxa dadka degaanka ceel berdaale dagani ay nabad ku caano maalay 17 sano oo aan cid dhul isku heysata anaan arag J/Abokor iyo cid kale midna.
Dadkaasi wa isdhex degeen sidii hore cidcid wax ka doonaeysay ma jirin haba yaraatee.Marka laga reebo isku day kan oo kale ah oo syaasadeysnaa oo la doonayey in dawladii Cigaal loogu abuuro dhib ka dibna cigaal inta iska gartay u joojiyey. Haddaba gartay kuwa dhibtan abuuray ee Hargeysa iyo Gabiley iyo nawaaxigeeda ee leh beelo ayaa dhul isku haya ee dhagarta codad lagu doonayo soo maleegay ee dadkoodii iyo dadke midna an urooneyn. Lakiin waxan la yaaban ahay kuwo reer Awdal ah ee Eray dhagareysan oo afka loo galiyey qaadanaya ee leh beelo ayaa dhul isku haya. War miyeydaan ogeyn in dhulkan sida Magalo cad iyo Dila loo degan yahay in reer nour u daganyahay oo wax gar laga geli karoba aanu aheyn.
Hadaad arintan iyo dhulkan aad shiki gelisaan sida ay doonayaan dadqalatada ina Raage iyo inta adeegsataba ee xaraanta isku baheysatay ee uu kow ka yahay Kulmiye & Saleeman Gaal oo aad qaadataan in dhul beelo isku heystaan uu jiro .Beri ka maalinaa Dila iyo magaalo cad ayaad odhaneysaan beelo ayaa isku heysta. Haddaba waxan jecelahay qofkii Reer Awdal ahee makorafoonka soo joosada ee jecel inuu hadlow Ereyga dhagareysan oo xaraanta ah oo afka laguu galiyey ha ku hadlin oo soo bilowday diiwangelintii.
Runta u sheega inay inay dhagareysanyihiin xukuumad iyo xisbiba oo dhiigga dadka uun la doonayo in codad doorasho lagu galo loo badasho. Lixdaa bilood ee arintaas socotay dadbaa dhimanyey dhawacmayey oo dhigooda la xalaaleystay oo ay udambeeyeen Afartii nin ee jidka lagu qashay iyo shan kale oo ka mid ahaayeen wiilkii yara ee Boraama lagu dilay,wiilkii yaraa ee Burdi lagu uus xabaalay iyo labadii nin ee guryahooda lagu dilay ee midkood curyaanka ahaa. Waxaas tuugo may dilin rag beero doonayaa mey dilin waa qorsho siyaasadeysan oo xaraan ah oo la doonayo in cod lagu helo. Marka waxyalba lagugu sameeyey ee la gaadhay in dhiigaaga iyo ka walaalka oo safar ah oo aan waxba geysan inla xalaleysto oo cod doorasho lagu galo loo isticmaalo maxaa idiin ku hadhay.
Marka ay qarsanwaayeen ee madaxdoodii sida Bashiir Tukaale iyo ilko Dahable iyo mudakarkoodii ay idaacadaha ka hadlayaan ee lagu sheegay weliba inla soo qabto caruurta Borama ee la la leehay arintan beer ceel berdaale ayaa keentay dilkan waxshiga ee aad waliba dhageysaneysaan ee aad danhooda qurxineysan ee weedhooda qaadeysaan ma wax baa baa idiin dhiman? Hadaad hadleysaan halka ay taagantahay ka hadla iyo Hargeysa in aan wax dambe aynaan ka sugin hadii kale iska aamusa.
Qorsha dhiigan loo daadinayaa wuu iska cadaa ilaa bilowgii waan ka hadalnay waanan sheegnay shirqoolada sadex geeska ah ee socda ee la doonayo inla isticmaalo Sacad Muse(J/Abokor) dagaal la oogo dhiig la xalaleysto si codad loga sameeyo.Codadkaas oo sidii samaha aheyd lagu waayey ka dib markii haldoorkii Sacad Muse dhinaca xukuumadda ay udulaanmeen. Xukuumadda Rayaale: Xukuumadda ina Rayale hawsheedii amniga way gabtay bilow ilaa dhamaad ,hawshaa Kulmiye ku jiro mid leeg ayey ku jirtaa oo ah in dhiiga dadka in cod doorasho lagu bedesho. Amniga ayaa ahaa musuuliyadda kowaad ee xukuumadda,hadii amingu baabayo doorashada iyo codku xaguu ka imanayaa.Siday ulaheeyeen Sacad Muuse ilaasho codkooda yaanu Kulmiye kaala hoos bixine ayaa aakhiro loo diray oo hoostoodii dadkii lagu qashay oo dadqalatadii Gabiley ay Boliiska la qayilayaan oo awoodii xukuumad laheyd la baabiyey oo lagu qoslayaa tamar darada xukuumadda iyo shaxda lala ciyaarayo oo ay qarka ay usaarantahay inay ku dunto. Lix bilood ka hor ayaa xukuumadda loo digay markii ina Raage Qaate buurta galay. Waxay aheyd maalintaa ninkaas bilaabay inuu amnigii wax yeeleyyo in xukuumaddu soo qabato.Madhicin ka dib waxa uu noqday dagaal ooge dagaal ooge koonfur ayeynu ka fileynay meel casimadii 40Km u jirta inuu dagaal ooge galo oo wax laga qabanwaayo waala yaab! Imikana wakaa sii dalacay ee noqday hogaamiyaha dadqalatada.
Xukuumaddu awood umay waayin lakiin hagrashaa jirta hagarshadaas ayaa dadkii u dhimanayaan oo lo qalanayaa oo amingii ay sugi kariweyday xukuumaddu. Dadku waxa loo baahanyahay inay fahmaan Ceel- Bredaale iyo Caaddaba in Hargeysa iyo Gabiley ay uisticmalaan arimo siyasadeed,marka la doonayo in dan siyasaded oo samo lagu heli waayey lagu fushado.Horena way udhacday oo ay dhib iyo dhagarba way keentay. Madxweyne Cigal wakhtigiisii waa loola yimid lakiin wuu iska badbadiyey. Waxaa Cigaal u yimid nin reer Gabiley ah oo Rayaale mar Wasiir u ahaa imikana Kulmiye ah oo magaciisa la yidhaa Ina diiriye Xajiin (abiib timacad) waxa uu ka doonayey Cigaal Waiir kadib Cigaalna wuu diiday waxa uu ku yidhi hadaanad Wasiir isiineyn waxan tagi Ceel-Berdaale ama Cadda aad faraha kaga gubatid eh oo buurta ayaan Geli sida ina Raage ugalay. Maxweyne Cigaal inta xanaaqay ayuu ugu jawaabay haddad kantaroolka galbeed ee Hargeysa lagugu soo sheega adoo jooga xadhig baa tahay isagoo jooga halkii ayuu talihii boliska wacay oo amarkii siyey si uu markhaati ugu noqdo. Ina Diiriye Xajiin London buu iska yimid oo lafiihisii ayuu ubaqay.sidaas ayuu cigaal kaga badbaaday oo aan loogu isticmaalin arinkaa Ceel-Berdaale iyo Caadda midna.
Ina Rayaale waxay aheyd in in Raage qaate qaate uu sidaas ka yeelo oo aanu dadka ku daawan ,hase yeeshee hore wuu u ilduufay lakiin maanta oo isagoo iyo xukunkiisii iyo awoodiisaba laga horyimid oo dadkii safarka ahaa lagu hoos qalanayo waxa uu sugayo garanmaayo! Gabagabadii Hargeysa nabadgelyaa inaga dhexeysay oo lagu sugay mustaqbalka tiina meesha way ka baxday,hadaba reer Awdalow xaduudihiina xidha Hargeysa waxba kama soo socdaan. Maanta oo udambeysay Kulmiye wadaadka arimaha dibadda u qaabilsan Mohamed Abdilaahi waxa uu kula shirayey Washington sida ay Kulmiye sheegteen Congressman Donald Payne oo hore usheegay in aanay aqoonsaneyn wax la yiraa somaliland ee ay ka mid tahay gobolada Somaliyeed.Qorshaha Mareykankuna waxa weeye in gobolada Woqooyigu ee la baxay Puntland iyo S/Land la caawiyo dhaqale ahaan iyo ciidanba oo ay Xamar iyo gobolada koonfurta somaliya ka badbadiyaan ALshabaab.Inkastoo xukuumaddu Rayaale ka gaabsatay oo ay khalad sameeyen ka dib marki ay ka baaqsadeen shirkii Washington ka dibna loogu hanjabay in la go,odoomin doono hadaanay qorshahaas somaliya lagu badbadinayo anay ka soo qeybgalin. Haddaba maanta waxa socdaa wixii hore way ka duwanyihiin shirkii Borama 1993 iyo midhihisii waxa uu ku dhamaaday dhagartii udambeysay ee dadka lagu qashay oo aan weli hore uga dhicin cariga somaliyeed oo soo bilaabantay malintii diiwangelinta Awdal.Reer Awdal la socda xaaladaha taagan imika wixii tariikh ee aad ka soo qeyqaadateen sida shirarkii nabadeynta beelaha iwm halkooda udaaya waa la qori donaa xume iyo samo labadaba lakiin xaaladan imika waa mid aad uga duwan waxyaabahaas wanaagsan ee hore udhacay sidaa awgeed wakhti badan ha iskaga lumininaya ee ku camal fala waxa socda iyo halka lo socdo. .
This entry was posted on July 28, 2009 at 8:54 am	and is filed under 1. Tagged: 1. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.